PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-07 - 1. INDODA YAMI IYANGIHLUKUMEZA
1. INDODA YAMI IYANGIHLUKUMEZA
UMBUZO: NGINENKINGA, indoda yami iyangihlukumeza, iyaphinga. Le nto ingiphethe kabi, sengathi mina angisayithokozisi.
IMPENDULO: NGIFISA engabe uthe ukwenaba kancane, washo ukuthi njengoba uthi yindoda yakho nje nishadile yini noma niyajola. Lokhu ngikusho ngoba ngeke ifane indlela abantu abashadile okumele benze ngayo lapho benezinselelo emshadweni, nendlela abantu abajolayo okumele benze ngayo.
Umjolo yinto engekho emthethweni kanti umshado yinto esemthethweni, ngakho kunemigudu okumele ilandelwe uma kukhona okungasahambi kahle emshadweni.
Kodwa-ke noma ngabe nishadile noma niyajola, okokuqala okumele kwenzeke uma kunenkinga wukuba nihlale phansi kukhulunywe ngaleyo nkinga, kungabi bikho ofela ngaphakathi.
Uma-ke isixazululo singatholakali naphezu kwemizamo yokubonisana, usungacabanga ngesinqumo esiyokwenza wena ukhululeke. Angikwazi ukukutshela ukuthi yenzani, kodwa nguwena okumele uzithathele isinqumo.
Ungazikhethela ukuba uyishiye indoda yakho noma ubekezele. Kufanele wazi nokho ukuthi kuzo zombili lezi zinqumo ngeke kube lula. nda, nengane isajabulela ukuba noyise.
IMPENDULO: Ngiyazibuza nje ukuthi yini le eyenza ukuba indoda yakho ingakwethembi? Yini le edale lesi simo ngoba umuntu uma engakwethembi kusuke kukhona lapho indaba iqale khona.
Ngenxa yokuthi awucacisi ngesizathu esenza indoda yakho ingakwethembi, akuzukuba lula ukuba ngikuphendule ngokuphelele.
Engingakutshela khona nje ukuthi inzima indaba yabantu abahlala ngokungathembani, empeleni nje kungakufaka ngisho engozini ukuhlala nomuntu ongakwethembi nhlobo.
Kufana nokuhlala nomuntu onesikhwele ngokweqile, kuyingozi ngoba angagcina ekulimaza. Mayelana nokwengane, kuhle ngoba ugcine eyivumile ukuthi ngeyakhe. Ngicela uhlale phansi nendoda yakho nixoxe ngale nto eyenza ingakwethembi, bese uzama ukulungisa izindlela zakho nendlela yokuziphatha uma kuwukuthi yikhona lokho okudala lesi simo. mba ukuba ayiphinde le nto. Ngelaphe.
IMPENDULO: NGIYADABUKA ngokukwehlele mfundisi. Ngiyabuqonda ubuhlungu nobunzima obhekene nabo ngenxa yalesi simo. Nakuba kukusizile ukuba uyibambe inkosikazi yakho ukuthi igila lo mkhuba kodwa asikhumbuzane ukuthi umakhalekhukhwini womunye umuntu akukuhle ukuwuthatha utatulule okuphakathi ngoba okunye oyokuthola kuyokwephula inhliziyo.
Ezinye izinto zilunge singazazi futhi singaziboni ngoba mhlazane sazibona impilo yethu iyoshintsha kakhulu.
Engikuthandayo odabeni lwakho wukuthi inkosikazi yakho izehlisile, yaxolisa njengoba usho.
Muhle umuntu okwaziyo ukuzehlisa axolise. Umuntu osuke exolisa futhi ezisola ngobubi abenzile ufanelwe wukuba axolelwe futhi anikezwe elinye ithuba. Ngithi mina mnikeze elinye ithuba umkakho, umethembe, kodwa-ke kufanele uhlale uwavulile amehlo.
Uma ekuhlonipha futhi ewuhlonipha nomendo ngeke esaphinda enze lokhu.
UMFUNDI ubalisa ngendoda emhlukumezayo, ephingayo. Uthi lokhu kumphethe kabi ngoba ubona sengathi lokhu kusho ukuthi ayisayitholi injabulo kuye.